चाडपर्वको सिजन ; कति दिन बन्द हुन्छ बैंक र सेयर बजार ? - DURBAR TIMES
HomeCulture & Religionचाडपर्वको सिजन ; कति दिन बन्द हुन्छ बैंक र सेयर बजार ?
Culture & ReligionShare Bazar
चाडपर्वको सिजन ; कति दिन बन्द हुन्छ बैंक र सेयर बजार ?
असोज लागेसँगै चाडपर्वको चहलपहल सुरु भएको छ। त्यसो त कहिले दशैं तिहार अधिकमासका कारण कार्तिक पनि पुग्छ तर यो साल भने असोज २१ बाट बिजया दशमी सुरु हुँदैछ। बजारमा चाडपर्वका लागि आवश्यक सामग्रीको माग, खरिद र बिक्रिको राम्रै माहोल देखिन थालेको छ ।
नजिकिएको दशैं र त्यसको केहि दिनमा सुरु हुने तिहार र छठ गर्दै लगभग एक महिना चाडको माहोल रहने गर्दछ। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि भ्यान नभ्याइछ। चाडपर्वका लागि नयाँ नोट साट्नेदेखि खर्च जोहो गर्न आफ्नो खातामा रहेको पैसा झिक्नेको भीड लाग्न थालेको छ।
दसैँ र तिहारको बिदामा अधिकांश मानिस घरपरिवारसँगै रमाइलो गरी बिताउँछन्। केही भने परिवारका साथ घुमफिर गर्न देशभित्रै र बाहिर निस्किन्छन्।
यसपालि बडा दसैँ र तिहार क्रमशः असोज र कात्तिकमा परेको छ। जसका कारण यी दुवै महिनामा अन्य महिनाको तुलनामा सार्वजनिक बिदा धेरै परेको छ।
असोजमा ५ शनिबारसहित कुल ११ दिन बिदा परेको छ। असोज ३ गते संविधान दिवसको बिदा भइसकेको छ। असोज २१ गतेबाट बडादसैँ सुरु हुँदैछ। यो दिन सार्वजनिक बिदा दिइएको छ। दसैँ बिदा भने असोज २६ गतेदेखि असोज ३० गतेसम्म दिइएको छ। असोज २६ गते फुलपाती, २७ गते महाअष्टमी, २८ गते नवमी र २९ गते विजयादशमी परेको छ। असोज ३० गते शनिबार एकादशी परेको छ।
कात्तिक महिनामा तिहार परेको छ। यो महिना ४ शनिबारसहित कुल ८ दिन बिदा दिइएको छ। तिहारको बिदा कात्तिक १८ गतेबाट सुरु भएर कात्तिक २१ गते सकिनेछ। कात्तिक १८ गते लक्ष्मीपूजा परेको छ। कात्तिक १९ गते म्हपूजा/गोबर्द्धन पूजा र कात्तिक २० गते शनिबार भाइटीका परेको छ। भाइटीको भोलिपल्ट अर्थात कात्तिक २१ गते पनि सार्वजनिक बिदा दिइएको छ।
कात्तिकमै छठ पर्वको पनि बिदा परेको छ। छठ कात्तिक २४ गते परेको छ।
असोज र कात्तिकमा यी बिदाका दिन सेयर बजार खुल्ने छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका कर्मचारीहरुलाई पनि बिदा दिइएको छ। ग्राहकको सुविधाका लागि भने विगतका दसैँ र तिहारको बिदामा पनि सेवासुविधा प्रदान गर्दै आएका थिए। यसपालि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सूचना जारी गर्दै बिदा दिनको सेवा प्रवाहसम्बन्धी जानकारी गराउने छन्।
Previous articleप्रि ओपन सेसन अपडेटः करिब २ अंक घट्याे नेप्से
Next articleरिज लाईन ईनर्जीले गर्यो आईपीओ निष्कासनको तयारी